याँ तरीकाको बालीका लागि विशेषज्ञ प्रत्येक वडामा हुनु आवश्यक छ :नरेन्द्र अधिकारी « Phidim Today
याँ तरीकाको बालीका लागि विशेषज्ञ प्रत्येक वडामा हुनु आवश्यक छ :नरेन्द्र अधिकारी
Published on:4June, 2019 1:59 am
नरेन्द्र अधिकारी नेपाल अलैँची ब्यवसायी महाँघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन । अलैँचीको बिग्रदो अवस्थाका कारण यतीखेर ब्यवसायी कृषक सहित आम सरोकारवाला चिन्तमा छन । अधिकारीसँग अलैची खेती र व्यापारीक गतिबिधिबारे गरिएको कुराकानी ः–
फिदिम नगरपालिकालाई विकसित र समृद्ध बनाउँन व्यवसायीको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
समय सुहाउँदो उद्योग र व्यापारको स्थापना हुनु पर्छ । यस नगरपालिका भित्र समुद्र देखी ८ हजार २ सय फिट अग्ला डाँडाहरु समेत भएकोले प्रसस्तै आन्तरिक तथावा्हय पर्यटकहरु आउने सक्ने हुनाले सुविधा सम्पन्न होटलहरु, उच्च शिक्षाको लागि विद्यालयहरु, सुविधा र प्रविधिले सम्पन्न अस्पतालहरु, नीजि क्षेत्रबाट स्थापना गरी गुणस्तरिय सेवादिई नगरपालिका को इज्जत र गरिमा बढाउँन अहम भमिका खेल्नुपर्छ ।
नगरले व्यावसायी, उद्यमी तथा वाणिज्य संघलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाउँन आवश्यक छ ?
सर्व प्रथम व्यवसायिहरुलाई राज्यको नीति तथा विधि वमोजिम चलाउँनका निम्ति सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा नगरपालिकाले दर्ताको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । कतिपय कुराहरु पुुराना नीतिका कारणले गर्दा व्यवसाय गर्न असहज अवस्था छ । समयानुकुल ती नितिहरु पनि परिवर्तन गरेर सहज बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा फिदिम नगरपालिकामा रोजगारीका अवसरहरु समेत बड्न सक्ने तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
फिदिम बजारको व्यापार ब्यवसाय यस बजारको चहल पहल बढाँउन र फिदिम बजारको व्यापार व्यवसाय कारोबार बढाँउन अब नगरले के गर्न आवश्यक छ ?
पाँचथर जिल्लाको सदरमुकामको रुपमा रहेको फिदिमनगरपालिकामा लगभग छ हजार घरधुरी, २५ हजार जनसंख्या र ३ हजार ४ सय ९५ हेक्टर भु–भागमा फैलिएको यस नगरपालिका भित्र प्रसस्तै उद्योगहरु स्थापना गरेर उपभोग्य फैलिएको यस नगपालिका भित्र प्रसस्तै उद्योगहरु स्थापना गरेर उपभोग्य बस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छन् । हाते कागज, ढाकाबुनाई, पोल्ट्रीफर्म मतस्य पालन, डेरी उद्योग (ध्यु, छुर्पि) स्थापना गर्न नगरपालिकाबाट प्राविधिक सहयोग गराई गुणस्तरिय सामान उत्पादन गराउनु पर्छ । बाहिरबाट आयत सामानहरुलाई प्रतिस्थापन गरी स्थानिय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै वर्षमा २ पटक मिनि एक्ष्पो आयोजना गरी अन्य जिल्लाहरुमा दिन सकेमा निर्यात गर्न पनि सहजहुने छ । यसले नगर क्षेत्रमा अत्याधिक कारोबार बृद्धिभई चहलपहल बढ्को छ ।
नगदेवालि आलैचीको उत्पादन वृद्धि गर्न गुणस्तरिय सुधार तथा बजारिकारणको व्यवस्था गर्न नगरपालिकाले के गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ?
फिदिम नगरपालिका भित्र अलैचिीको लागि सुहाउँदो हावापानी भएको स्थानहरु प्रसस्तै छन् । सेपिलो जमिन, सिचाइको सुविधा, मुलको पानीभएको हुनाले नगरपालिकाबाट प्राविधिक सहयोग गरिदिए यस क्षेत्रका किसानलाई आर्थिक हैसियत चाँडै नै उठ्ने सम्भावना छ । नयाँ तरकारी बालीका कार्यका लागि विशेषज्ञ प्रत्येक वडामा हुनु आवश्यक छ । किसानहरुलाई प्रोसाहित गरी राय सल्लाह र सुझाव दिई बेमौसमी खेतीतर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ । यस नगर क्षेत्र भित्र उत्पादित कृषि जन्य जडिबुटी र घरेलु उधोगबाट तयार भएका ढाका, राडी र अन्य सामान संकलन गरि एउटा कोशेली घरको स्थापना गर्नु अत्यन्त राम्रो र अरुरी पनि देखिन्छ ।